भगवान शिवले माता पार्वतीलाई बताएका थिए यस्ता ५ गोप्य कुरा, के हो त त्यो? जानिराखौ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भगवान शिवले माता पार्वतीलाई बताएका थिए यस्ता ५ गोप्य कुरा, के हो त त्यो? जानिराखौ!
एजेन्सी, भगवान शिवले माता पार्वतीलाई निकै अवसरहरुमा मानव जिवनसंग जोडिएका निकै रहस्यहरु बताएका थिए । भगवान शिवले माता पार्वतीलाई जुन पाठ पढाए त्यो मानव जीवन, परिवार र विवाहित जिन्दगीको लागी निकै महत्वपूर्ण छ । भगवान शिवले माता पार्वतीलाई यस्ता ५ चमत्कारी कुराहरु बताएका छन्, जसलाई बुझ्ने हो भने तपाइको जिन्दगीमा निकै ठुलो परिवर्तन आउनेछ ।
नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकं परम् । दुनियामा मान-सम्मान कमाउनु र सधैँ सत्य वचन बोल्नु नै मानिसको सबैभन्दा ठुलो गुण हो। धोका दिनु र बैमानी गर्नु सबैभन्दा ठुलो पाप हो । त्यसैले मानिस आफ्नो जिन्दगीमा सधैँ इमान्दार बन्नु पर्दछ ।
मानिसले परिश्रम गर्नुको साथै आफ्नो मुल्याङ्कन आफै गरि रहनु पर्दछ । मानिसलाई सधै आफ्नो कर्म र व्यवहारमा ध्यान दिनु पर्दछ । कोहि पनि त्यस्तो काममा लिप्त हुन हुँदैन जुन नैतिक रुपले गलत होस् ।
कर्म प्रति सतर्क:
कसैले पनि वाणी, कर्म र विचारको माध्यामबाट पाप गर्नु हुँदैन । यानी पापपूर्ण कर्म गर्नु हुँदैन र विचार र वाणीमा अशुद्धता ल्याउनु हुँदैन । सबै आफ्नो जीवनको कर्म प्रति सतर्क रहनु पर्दछ ।
मोह नै सबै समस्याको जड हो । मोह-मायाले सफलताको बाटोमा वाधा उत्पन्न गर्दछ । जब तपाइ दुनियाको सबै मोह र मायाबाट मुक्त हुनुहुन्छ तब तपाइलाई सफलता मिल्नबाट केहिले रोक्दैन । यो मोह मायाबाट बाच्ने एउटै उपाय छ र त्यो हो मानिसले क्षणिकतालाई बुझ्न सक्नु पर्दछ र आफ्नो मस्तिष्कलाई त्यसै अनुरुप ढाल्नु पर्दछ ।
मृगतृष्णा सबै कष्टको एक मात्र उपाय हो । मानिसले एकपछि अर्को चिजको लागी दौडनुको साटो ध्यानमा मन लगाउनु पर्दछ । कर्मको चक्र र शरीरको बन्धनबाट मुक्तिको लागी ध्यानको अभ्यास गरि रहनु पर्दछ ।
टीकापुर घटना : के भन्छन् रिहा हुनेहरु ?
१७ वर्षीया युवतीको भेटियो लाश, यस्तो कारण देखाउँदै परिवारले शव लिन मानेनन्